Nahoana no mila faranana ny ‘Chhaupadi’ fomban-drazana Nepaley mahafaty · Global Voices teny Malagasy
"Misy ny lalàna manameloka ny Chhaupadi, mbola mijoro ilay fombandrazana"
Voadika ny 13 Desambra 2019 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Français, русский, Italiano, English
Fampianarana Fahasalamana ho an'ny daholobe – Tantara tsangana andalambe miresaka chhaupadi. Saripika Flickr an'i Possible/Nyaya Health. CC BY 2.0
Firenena maro isa-taona, ary tafiditra amin'izany i Nepal, no manatevin-daharana amin'ny fanentanana iraisampirenena 16 andro fikatrohana anoherana ny herisetra mifototra amin'ny mahavehivavy, mbola manohy amin'ny famoizana tanoravavy sy vehivavy ihany ny tanàna madinika sasantsasany ao andrefana sy farany andrefan'i Nepal noho ny fombandrazana maharitra an-jato taonany antsoina hoe chhaupadi.
Tamin'ny 1 Desambra 2019, hita faty tao amin'ny tranobongo kely tsy ampy rivotra tao amin'ny distrikan'i Achham any amin'ny farany andrefan'i Nepal rehefa voarara tsy hahazo hiditra ny trano mandritra ny fadimbolany i Parwati Budha, 21 taona. Miahiahy ny polisy fa vokatry ny fahasemporana noho ny setroka tafahoatra hiezahany hanafanana ny fialofany mandritra ny alina mangatsiaka no nahafaty azy. Mihoatra ny 15 ny zazavavy namoy ny ainy tao anatin'ny folo taona noho ity fomba tsy mety ity.
Na dia misy aza ny lalàna manameloka ny Chhaupadi, mbola mijoro hatrany ilay fombandrazana, omen'ny fiarahamonina mampanjaka tanteraka ny fitondran'ny ray vahana. Izay rehetra fihaikana amin'ny anjaran'ny vehivavy dia mizaka fanarian'ny fiarahamonina avy hatrany.
Ny Chhaupadi dia endrika fady amin'ny fadim-bolana izay mandrara ny vehivavy sy ny zazavavy haindò tsy hanao ny raharaha mahazatra rehefa tonga ny fadim-bolana. Rehefa tonga ny fadimbolan'ny vehivavy dia heverina ho “maloto” ry zareo ary terena hiaina manirery ao amin'ny tranobongo na ao amin'ny valan'omby feno fotaka. Tsy avela ry zareo hiditra ao an-tranony, hihaona amin'ny fianakaviany — indrindra fa ny lahy ao amin'ny fianakaviana — ary tsy mahazo miditra amin'ny tempoly. Sakanana ry zareo mba tsy hisotro ronono, yogurt, dobera, hena, ary sakafo mahavelona hafa, ary tsy mahazo mampiasa bodofotsy mafana mandritra ny ririnina fa fanitsahan-tongotra kely ihany no azon-dry zareo ampiasaina.
Mandritra ny fadimbolana ny vehivavy no mitandrina ny chhaupadi ao amin'ny tranobongo zara fa vita, tsy ara-pahasalamana ary tsy azon-drivotra tsara, miatrika fanahiana ara-pahasalamana mety hiantraika aman'aina ireo vehivavy ireo toy ny aretin-kibo, aretin-tratra, ary ireo aretin'ny fisefoana. Atrehin'izy ireo ihany koa ny loza avy amin'ny fanafihan'ny biby mpirenireny, eny fa na hatramin'ny fihoaram-pefy sy fanolanana aza.
Tsy ara-dalàna sady tsy mahaolombelona ny fanilikilihana mandritra ny fadim-bolana. Miatrika izany isam-bolana ny 44 isanjaton'ny vehivavy ao antenantenany sy ny any amin'ny farany andrefana.
Mampiasa ny 16 andron'ny fikatrohana manaraka izahay hampiasa data hiresahana fanahiana herisetra mifototra amin'ny maha-vehivavy ao Nepal
Efa ela ity fomba iray ity no voatsikera satria manitsakitsaka ny zo fototra maha-olombelona ny vehivavy noho ny ratra ara-tsaina sy ara-batana atao azy ireo.
Vakio ity: Chhaupadi, the Dwindling Nepalese Tradition That Turns Women Into Outcasts During Their Periods
Tamin'ny taona 2005 ny fitsarana tampony Nepaley no nandrara ny fomba chhaupadi, saingy mbola atao hatrany ilay fomba ary mitohy isa-taona ny fahafatesam-behivavy, ary ny mampalahelo dia tsy misy milaza ny amin'izany. Tamin'ny Aogositra 2017, the country was voatery ny firenena hanambara fisian'ny lalàna vaovao taorian'ny firesahana betsaka fahafatesam-behivavy maro mampihatra ny chhaupadi. Araka ny ao anatin'ny lalàna, izay rehetra manery ny vehivavy iray hanaraka ilay fomba dia mety hihatra aminy ny telo volana am-ponja na ny onitra Rs 3,000 ($30) na izy roa miaraka, saingy, tsy nampiharina mihitsy ilay izy. Na dia eo aza ny fametrahana azy ho heloka bevava, dia mbola misy hatramin'izao fotoana ilay fomba noho ny tsy fahaiza-mamaky teny, finoanoam-poana ary ny faindraisan'ny vondrom-piarahamonina izany ho andraikiny.
Nanondro ny tatitra maro amin'ireo solontenam-bahoaka, mpikatroky ny zon'olombelona ary mpampianatra no mandray anjara amin'ilay fomba efa natao ho heloka bevava any amin'ny faritra maro amin'ny distrikan'i Achham, Bajura ary Bajhang ao Nepal.
Zavamisy tena mampalahelo indrindra amin'ny fiarahamonina iainanay izay mila mahafoy ny ainy ny vehivavy satria tonga fotoana fotsiny, ary ahilikilika ry zareo noho ny tsingerin-javamiaina voajanahary ao aminy.
Matanjaka noho ny lalàna ny fomban-drazana
Tamin'ity indray mitoraka ity tsy nahazo fifantohana loatra avy amin'ireo andrim-panjakana (tokony hisahana izany) sy ny fampitam-baovao ny raharaha Parwati. Maro ireo programa fanairana sy fanentanana efa notanterahana teo aloha fa tsy ampy ny ezaka hitondrana izany hatramin'ny farany. Ny Firenena Mikambana (misahana ny) Vehivavy izao nanohana tetika napetraky ny INGO iray: Lahatsoratra iray navoakan'ny “Restless Development” mitondra ny lohateny hoe “Abolition of Chhaupadi in the Far- and Mid-Western Regions of Nepal” [fanafoanana ny Chhaupadi any amin'ireo faritra Farany sy Antenantenany Andrefana ao Nepal] no nilaza fa nahatratra vehivavy mihoatra ny 45 000 ny tetikasa ary nampihena ny tahan'ny vehivavy sy tovovavy matory ao amin'ny tranobongon'ny Chhaupadi (avy amin'ny 19,4 isanjato mankany amin'ny 5,5 isanjato). Na izany aza misy hatrany ny zazavavy tahaka an'i Parwati maty isa-taona.
Mila faniriana hetsika any amin'ireo sehatra fanaovan-dalàna ny asam-pamongorana ny rafitra chhaupadi. Tahaka izany ihany koa, ilaina ny lalàna sy ny fitsipika tsy hitsitsy mihitsy mba hampahomby amin'ny fampiharana azy. Ilaina ihany koa ny firotsahana sy ny fiasana miaraka amin'ireo mpisehatra isan-karazany amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, fikambanana mpiaro ny zon'olombelona amin'ny alalan'ny fanabeazam-bahoaka, fanentanana fampahafantarana ary fanohanana ireo lasibatra.
Rewati Raman Bhandari, mpanao lalàna teo aloha sady anisan'ny mpamolavola ny lalàna mametraka ho heloka bevava ny chhaupadi, no nanambara fa toa matanjaka kokoa noho ny lalàna ny fomban-drazana “mbola mipirimpirina loatra ny tosika hamongotra ny fomba — avy amin'ny tantsaha, polisy ary ny politisiana ao an-toerana — .”
Tsy maintsy mihetsika isika hanapitra ny fomban'ny chhaupadi eto Nepal
Na dia eo aza ny fanavaozana ny lalàna sy ny fanandratana teny ataon'ny vehivavy, mbola maka ain'ny zazavavy/vehivavy Nepali ihany ny aretina ara-tsosialin'ny Chhaupadi. Olana lalina mila atrehina.